Corner Hatanjaho hiatrika
Hasps foto sy nampakatra
Karazana talantalana Bracket-YW-01002
adidy mavesatra talantalana bracket-YW 01003
FGV vatasarihana Slider-YW-02002
Haining YongWang Hardware Factory no misy ao Shina fitaovana famokarana base-Yan'guan, atsinanan'i Shanghai, andrefan'i Hangzhou. Misy mety fifamoivoizana. Ny surgent Haining samonta koa amin'ny tanana akaiky. Indrindra indrindra ny orinasa isan-karazany manufactures horonan, hiatrehana, zoro strut, savily sy ireo karazana fitaovana. Amin'izao fotoana izao, orinasa manana fanapahana tariby, 8 grinders, planers sy ny fitaovana eo am-piandohan'ny bobongolo, be hery ara-teknika.
Ampiana hoe: Liannong Village, Yan'guan Town, Haining City, Zhejiang Province